Dhaqaalaha Ghostwriter waxaan ka caawiyaa waraaqaha BA ama MA
, 19: 11
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah dhanka maaliyadda
Darajada maaliyaddu ma aha koorso madax-bannaan oo laga qaato jaamacadaha Jarmalka. Taabadalkeed, aagga maaliyaddu waa qayb ka mid ah labada koorso Dhaqaalaha (VWL) iyo Maamulka Ganacsiga (BWL) lagu daro qaab ahaan koorsada guud. Dhanka kale, waxay u muuqataa mid ka duwan jaamacadaha cilmiga xirfadeed iyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay. Maaddaama jaamacadaha gaarka loo leeyahay ay maalgeliyaan waaxda gaarka loo leeyahay, aagga maaliyadda ayaa sidoo kale halkaas lagu dhigaa iyadoo laga eegayo hirgelinta wax ku oolka ah ee maaddada la baray. Ikhtiyaar kale oo loogu talagalay barashada maaliyadda waa barashada masaafada, taas oo ku dhowaad gaar u ah jaamacadaha gaarka loo leeyahay. Sida laga soo xigtay maal-galiyayaasha jaamacadaha gaarka loo leeyahay, maaddada daraasadda maaliyadeed sidoo kale waa laga saaray: talo-bixinta maaliyadeed ee shirkadaha iyo macaamiisha, sharciga canshuuraha ee ku-dhaqanka shirkadaha, maareynta dhaqaalaha, maareynta iyo maareynta, maareynta guryaha - in la xuso wax yar. Shahaadooyinka Bachelor-ka iyo Master-ka ayaa laga heli karaa dhammaan hay'adaha gaarka loo leeyahay.
Xaalado badan, aagga maaliyaddu sidoo kale waxay kuxirantahay mawduucyada xukunka maareynta dhaqaalaha. Tani macno ayey samaynaysaa maxaa yeelay maaliyaddu waa hal dhinac keliya oo maaraynta maaliyadda ah. Koorsada waxa loo qaybiyaa:
Dhaqaalaha iyo maamulka dhaqaalaha
Xaashida dheelitirka iyo canshuuraha shirkadaha
Canshuurta iibka / warbixinta maaliyadeed ee sanadlaha ah.
Gaar ahaan, waxyaabaha sharciga ka kooban ayaa qayb weyn ka ah koorsadan. Waxaan kugu taageeri karnaa qoraallada sayniska. Arday kasta ma laha xirfado intaas leeg oo midba mid leh. Intaas waxaa sii dheer, dhammaan xirfadahan waa in si wanaagsan loo barto si loogu guuleysto in la dhammaystiro shahaadada. Ardayda qaar waxay aad ugufiicanyihiin 3 kamid ah 4ta aag, laakiin si dhib yar unbaa uga gudbi karaan aaga afraad. Waan caawin karnaa ardayda. Waan ku caawinay sofort!
Si loo soo gudbiyo shaqada sayniska, shaqo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa. Tani waxay ku siin doontaa darajo wanaagsan.
Qoraalka cirfiidka ee maaliyadda
Qorayaashayagu waxay ku caawin karaan oo ay ka qaadi karaan buuqa. Qorayaashayagu waxay qibrad u leeyihiin sannado badan meelaha ay ku takhasusaan. Waxaad ku takhasustay goobtaada umana baahnid inaad barato shaqadaada. Qoraalka ghost ayaa kaa caawin doona! Toddobaadyo gudahood, ardaygu kuma dhisi karo aqoonta-maaddo uu qoraagu u soo dhistay sannado badan aaggan.
Shaqada tacliinta maaha mid qof walba u gaar ah. Barashada xirfaddan sidoo kale waa daal. Qoritaanka tacliinta tacliimeed waxay qaadataa waqti badan iyo shaqo joogto ah. Koorsada ayaa lagu soo gabagabeynayaa shahaadada bachelor ka. Marka mid shahaadada bachelor waa la qori karaa, waa in shaqo badan oo horumarsan la qabtaa. Taasi waxay qaadataa waqti ... waqti badan.
Maaliyadda nolosha xirfadeed
Markaad qalin jabiso shahaadada Masterka, shahaadada Masterka, Qoraal, Maqalka oder Qoraalka PhD waxaa jira dhowr fursado shaqo oo adiga lagaa heli karo. Adiga ayaa gacanta kuugu hayna su'aalaha dhaqaalaha. Iyadoo la dhameystiray shahaadada Masterka waxaad ka shaqeyn kartaa meelaha soo socda, tusaale ahaan:
La talinta maamulka,
Talo bixinta cashuurta,
Kadib markaad dhamaysato shahaadadaada, waxaad hada sifiican ubaratay maadooyinka dhaqaalaha. Iyada oo lagu jiro xaalada cilmi baarista ee hada, waxaad tahay musharax aad caan u ah shirkadaha markay tahay mowduucyada dhaqaalaha. The shahaadada Masterka sidaas darteed waa albaab u furan shirkado badan. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada.
Haddii aad maamusho inaad barato maaliyadda dawladda, waxaad runtii haysataa fursad wanaagsan oo aad ku gaadhayso xorriyadda dhaqaalaha. Waad tagi kartaa dadweynaha oo aad u shaqeyn kartaa bangiyada ama waxaad adigu furan kartaa bangi khadka tooska ah adiga oo adeegsanaya gargaarka aad u baahan tahay. Adduunku waa kaa. Adeegsiga adeegyadeena ayaa kaa caawin doona waxbarashadaada.
Hubinta tayada ee dhanka maaliyadda